« Olon’Andriamanitra miara-mivavaka ho amin’ny fanasitranana ny taniny »
Fiombonam-bavaka entina hanamafisana ny fifandraisana efa nirosoana sy hiaraha –mivavaka ho an’ny tanindrazana . Izany dia natao ny Alahady 11 Marsa 2012 tolakandro tao amin’ny FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA .
Nitarika ny fotoana : Pasteur RAHERIVAHATRAINA Sylvain . Nitoriteny : RASENDRAHASINA Lala Haja , Mpitandrina Filohan’ny BMF-FJKM.
Nitarika tamin’ny fiderana : ny « Groupe de Louange ».
Ny Niandohany : Ny taona 2009 dia nanaitra ny fiangonana maro ny Tompo noho ny toe-draharaha nisy teto amin’ny firenena. Vokatry ny fahatsapana, fa tsy mety izao fisaratsarahana sy fifanenjehana eo amin’ny Fiangonana FJKM sy ireo Fiangonana taty aoriana antsoina hoe : “Fiangonana zandriny” izao . Nisy ny fihaonana matetitetika nihaonan’ireo mpitondra fivavahana samihafa avy amin’ny Fiangonana mpitory ny Filazantsara.
24 JIONA 2009 : Fivoriana lehibe niarahan’ny Mpitondra Fiangonana miisa 100 tao amin’ny Fiangonana REFI Androndrakely . Nisy ny fifamelana teo amin’ny samy mpitondra fivavahana , noho izany fahalemena sy fahadisoan’ny tsirairay izay mifanaratsy sy mifanenjika , mifanaratsy izany. Nanomboka teo dia nifanaraka ny roa tonta fa ajanona hatreo ny fifanaratsiana satria samy mpirahalahy ao amin’ny Tompo . Nentina am-bavaka izany faniriana lalina izany . Tsaroana tokoa ny famangian’ny Fanahy Masina ny fiangonana tamin’ny alalan’ireo mpanompony ireo . Koa dia samy hanatanteraka ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay . Najanona tanteraka ny fitenenana hoe : Sekta , fiangonana maty, tsisy Fanahy Masina . .. Ny fifankatiavana no ezahana omena lanja eo amin’ny fifandraisana .
JOLAY 2009 : Fanompoam-pivavahana natao tao amin’ny FJKM Atsimon’ Imahamasina , niarahan’ny samy Mpitandrina . Mbola nisy fihaonana samihafa taorian’izany . Iray tamin’ireny ny fanatrehana ny Jobilin’i Pasteur RASENDRAHASINA Lala Haja .
JANOARY 2011 : Fanompoam-pivavahana sy Fifampiarahabana tratry ny taona vaovao , natao tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana .
JANOARY 2012 : Fanompoam-pivavahana sy Fifampiarahabana , REFI Androndrakely .
11 Marsa 2012 : Fanompoam-pivavahana voalohany niantsoana ny vahoakan’ Andriamanitra rehetra , FJKM Andrainarivo Fahasoavana . Azo ambara fa dingana lehibe izao atreha-maso izao , satria feno ny Fiangonana . Niainana tao ny Fanahin’ny fiombonana na dia samy manana ny fomba mahazatra azy toy ny fomba fivavaka sy ny fanao ( vavaka miteny mafy miaraka sy ny mangina , ny mitehaka …. Antenaina fa ho foana tsikelikely ny adiady , ny fifandranitana , ny fizahozahoana . Ny tanjona dia ny hanjakan’ny fihavanana any amin’ny isam-pianakavina mankany amin’ny fihavanam-pirenena . Dia ho fantatry ny olona rehetra fa Mpianatry ny Tompo tokoa ny mino Azy , sady vavolombelona amin’ny teny sy ny atao .
Fandraisam-pitenenana : 1-	Nandray ny fitenenana voalohany ny Filohan’ny Fiombonana, Andriamatoa ANDRIANAIVORAVELONA . Avy amin’ny Tompo izao ka mahagaga eo imasontsika . Efa ho arivo taona no nivavahan’ny Tompo hoe : “Mba ho iray ihany izy rehetra “. Hiaraka isika , hoy izy , tsy eto an-tany ihany fa hatrany an-danitra .Aoka hotandrovana tsara izao fihavanana izao . Rehefa mivavaka any an-trano dia tonony mandrakariva izao fiombonantsika izao .
2-	Pasteur RASENDRAHASINA Lala Haja , Filohan’ny FJKM :
Tsy mbola manana anarana raikitra iantsoana azy izao fiombonantsika izao . Santatry ny ho avy izao . Ny fifaliantsika dia ny fifampizarana ny fomba fanompoana an’ Andriamanitra . “Fa tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina” (Sal 133 : 1) .Ny hafatra lehibe hampitaina ankoatran’ny efa voalaza dia izao : Tsy tokony hifangalatra isika , izany hoe : tsy tokony hanjono anaty vovo , fa mbola be ny ondry any ivelan’ny vala mila antsika ny fanangonana azy ireny .Ara-tantara ihany ny maha- zokiny sy zandriny , fa isika rehetra dia samy manaiky an’ Andriamanitra Ray , Zanaka, Fanahy Masina . Mampahery antsika rehetra ny FJKM hazoto hitana ny firaisana .
HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY ANIE NY VONINAHITRA .